Askar Kenyan ah oo lagu dilay Gudaha Soomaaliya & Kenya oo War kasoo saartay – Banaadir Times
Askar Kenyan ah oo lagu dilay Gudaha Soomaaliya & Kenya oo War kasoo saartay
By banaadir 10th January 2021 65 No comment
Khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah ayaa kasoo gaaray Ciidamo Kenyan ah oo ka tirsan AMISOM qarax lagula eegtay Gaadiid ay wateen meel u dhow xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya.
Qaraxa oo ahaa miinada dhulka lagu Aaso ayaa Gaadiidka Ciidamada Kenya lagu eegtay wadada Dhoobleey, waxaana dowladda Kenya ay faah faahin ka bixisay khasaaraha qaraxa kasoo gaaray Ciidamadooda.
War kasoo baxay Milatariga Kenya ayaa lagu sheegay in Ciidamadooda kuwo ka tirsan AMISOM qaraxa lala eegtay, isla markaana weerarkaasi ay uga dhinteen Afar Askari.
Bayaanka kasoo baxay Milatariga Kenya ayaa lagu sheegay inay weli aruurinayaan macluumadka inta uu la egyahay khasaaraha rasmiga ah ee gaaray Ciidamada, isla markaana kuwa dhaawacyada halista ah qaba loo duulin doono Magaalada Nairobi si loogu daweeyo.
Al-Shabaab ayaa sheegtay mas’uuliyada qaraxa, iyaga oo sheegay inay ku dileen 5 Askari sidoo kalena ay ku gubeen laba Gaari oo kala ah Beebe iyo Taaw, in kastoo aysan dhankeeda ka hadlin dowladda Kenya.
Qaraxaan lagu dilay Askarta Kenya ah ayaa waxaa uu kusoo aadayaa Shan cishe ka hor sanad-guuradii shanaad ee kasoo waregtay weerarkii saldhigga Ciidamada Kenya ee deegaanka Ceel-Cadde ee gobolka Gedo, kaas oo dhacay 15-kii Jannaayo ee sanadkii
Dowladda Soomaaliya oo eedeyn kulul u jeedisay Dowladda Kenya